Ukusasazeka kweeRunes-Onke uMlingo wokuTolikwa kwakho ngeNyathelo ngenyathelo
Las Runes yenye yeendlela zokuvumisa ze inkcubeko ye-nordic amawaka eminyaka ubudala. Okwangoku kukho iindidi zeembaleki ukubuza nawuphi na umbuzo kuluhlu lwe imitsi yomlingo. Phakathi kwemibuzo edumileyo kwiirunes esinayo:
[i-bn-yokwahlulahlula ithegi = »Runes»]
1 Yintoni i-runes? IViking Futhark
2 Zithetha ntoni iirune?
3 Ukusetyenziswa kweeRunes namhlanje
4 Imvelaphi yeeRunes
5 Zeziphi zonke iintlobo zeeRunes ezisetyenziselwa zona?
6 Uzifunda njani iirum?
Yintoni i-runes? IViking Futhark
Iimbaleki ezivela i-alfabhethi yokubaleka (UFutharkson 24) kwaye oku emva koko kwenziwa Iimpawu ezi-24, apho uphawu ngalunye lunentsingiselo ethile, apho ifayile ye- ubugcisa bokubhula bokubonisa ukufunda iirhasi kwi irune roll, nokuba yiViking, yothando, iiceltic runes, Njl
Zithetha ntoni iirune?
Ilizwi "Runa" Yi Imvelaphi yaseIndiya / yaseYurophu, kunye nentsingiselo yokoqobo ngu «Imfihlo"Okanye"Imfihlakalo«, Le alfabhethi ye-runic yenziwa ukusuka kwimvelaphi yayo ngo- amatye amancinci (ekuqaleni la matye ayevela kumlambo ongcwelisiweyo), Apho zishicilelwa khona iisimboli kwilitye ngalinye kula.
Nganye yezo amatye amancinci abizwa ngokuba ziiRunes, Unentsingiselo ethile. Apho ukusetyenziswa kwayo ukusukela kumaxesha akudala yile isangqa esiza kukukhokela ebomini bakho.
Ukusetyenziswa kweeRunes namhlanje
Okwangoku ngaphandle kokuqonda ukuba sisebenzisa iMicrosoft Runes kunxibelelwano lwethu kwi-Intanethi, i Iianglophones, zihlala zisebenzisa Gebo rune (luphawu lwe uthandoKulo lonke unxibelelwano lwakho nokuba kunge-E-mail, WhatsApp okanye ngeSMS. Olu luphawu abalusebenzisayo bengazi ukuba yiRune yi X, (esetyenziswe ekupheleni komyalezo ngamnye, ukuthumela ukwanganjengoko sibona kumfanekiso ongezantsi:
Njengoko sibona, ngaphandle kokuqonda sisebenzisa iiRunes kumhla wethu. Kwaye uninzi lwabo bazisebenzisayo kwimiyalezo yabo, abayazi ngenene Imvelaphi yolo mqondiso.
El Imvelaphi iza ngokweentsomi zaseScandinaviaukuba UThixo odin, Uthixo wabo bonke oothixo namagorha, eyayixhonywe kwi- umthi woBomi Iintsuku ezili-9.
Njengomnikelo wokubandezeleka awakufumana u-Odin, kule nto Wanikwa amandla olwazi runes, igunya lakhe yayikukukuthumela kumadoda exesha.
Ngokuhamba kwexesha nanamhlanje, enkosi kwizinto zakudala, Ibeyi Ukufumana kwakhona i-alfabhethi ye-runic en amangcwaba ookhokho basejamani. Umhla wokuqikelelwa kokubonakala kweesimboli ngokwezifundo zezinto zakudala wabuyela kunyaka Ngowama-200 BC.
Njengobungqina obongezelelekileyo, obungcwatyelwe kumangcwaba amaJamani nawo afunyenwe Iminqwazi yeViking kunye namakhaka (ecaleni kwamakrele) awayesetyenziswa ngelo xesha (unyaka ka-800-1000), Apho zitywinwe ngeesimboli zeembaleki.
Zeziphi zonke iintlobo zeeRunes ezisetyenziselwa zona?
Ngokukodwa, iiMagic Runes zisetyenziswa njenge indlela yokuvumisa, ngakumbi ngakumbi ubugcisa bokukukhokela ebomini. Kubalulekile ukuyigxininisa loo nto IiRunes aziqashisi ngekamva, ukuba akunjalo, basusa amathandabuzo kwaye basinceda fumana eyona ndlela.
Isikhokela kwikamva lethu, kunye nokuba luncedo ekucamngeni nasekuphiliseni.
Uzifunda njani iirum?
Akunjalo kwakona el mundo uyakwazi ukufunda nokutolika iiRune ngokugqibeleleyo, Bambalwa kuphela abantu abanolwazi oluyimfuneko lokufumana iintsingiselo ngokuchanekileyo. Ayisiyongxaki yokufunda i Intsingiselo yeRune nganye, ukuba ayizukunxibelelana nomntu ocelayo, kwaye ukwazi ukungena emphefumlweni wabo.
Runes uncedo Phendula imibuzo ethe ngqo ngexesha elithile, ngokuchanekileyo. Kubalulekile ukuba uyazi indlela yokuchaza ngokuchanekileyo indlela ye- umyalezo ofihliweyo weeRunes.
Tarot EWE okanye HAYI
IIMPILO ufunde YEHLA EMZIMBENI Ukuphulukana nobunzima | INGXAKI IINxila IBhayibhile UKUPHILA Njani Iidayos Iintlobo ezahlukeneyo Injongo Imifanekiso Iintsomi IMathematika Amaphupha am Imithandazo Popular Santos Akukhohlulwanga Amaphupha Iifayile ukuvumisa Whatsapp